URosselkhoztsentr uxwayisa: "I-Colorado wave" ihlanganisa iKrasnoyarsk Territory - Magazine System Magazine
URosselkhoztsentr uxwayisa: "I-Colorado wave" ihlanganisa i-Krasnoyarsk Territory
Jul 27, 05:46
Ochwepheshe begatsha le-Federal State Budgetary Institution "Rosselkhoztsentr" eKrasnoyarsk Territory ngesikhathi sokukhula sika-2020 bayiqaphele intuthuko esebenzayo yebhungane lamazambane laseColorado ezindaweni ezisempumalanga esifundeni. Izikhungo zitholakele izibungu zitholakale emasimini amazambane azimele e-Abanskiy, Dzerzhinskiy, Motyginskiy (enyakatho-mpumalanga) nasezifundeni zasePartizanskiy. Inani labo lifinyelela kubantu abangama-50 / isihlahla, esiphakeme izikhathi ezingama-2,5-5-10 kunomkhawulo wezomnotho wokulimala (i-EPV) elilingana nabantu abangu-20-5 / isihlahla lapho izitshalo ezingama-10-XNUMX% sezigcwele.
Ibhungane lamazambane leColorado lavela esifundeni ngonyaka we-2001, okokuqala eningizimu (isifunda saseShushensky), kwathi ngonyaka we-2003 entshonalanga yendawo (i-Achinsky, Bogotolsky, izifunda zaseNazarovsky). Ngokuhamba kwesikhathi, kancane kancane, ukuzivumelanisa nezimo zemvelo nezesimo sezulu salesi sifunda, inkathazo yahlukanisa ngokuphelele izingadi zamaqembu asentshonalanga naseningizimu yezifunda zesifunda. Iminyaka eminingi maphakathi nesifunda, izindawo zokulondolozwa nokulimazeka kwesibalo sabantu bakhona emzaneni waseChelnokovo waseBerezovsky, kanye nase- Atomanovo, Sukhobuzimsky district. Ngo-2017, ngesikhathi kuqubuka lesi sibalo, inkathazo yasondela eKrasnoyarsk eduze, yalimaza ukutshala kwamazambane ezindaweni ezingaphansi komhlaba - idolobhana lase-Ust-Mana. Emikhakheni yokukhiqiza yesiko, ibhungane lamazambane leColorado liye labonwa ngezikhathi ezithile kusukela ngo-2008. Amapulazi ahlakulela amahektha ayizinkulungwane eziyi-1,0.
Kuze kube manje, inyakatho kanye nasempumalanga yeKrasnoyarsk Territory yahlala ingenazo izilokazane. Kodwa-ke, ukuvuselelwa okunhlobonhlobo okuhlukahlukene nokushintshwa kwamazambane ezinhlakeni ezizimele kufake isandla ekwethulweni kwebhungane lamazambane leColorado kulezi zindawo. Ingabe inani lezinyamazane lizokhuphuka lapha? Sizobona…. Okwamanje, abalweli abasha - abavikeli bamazambane, kunconywa ukuthi babekezele futhi baqoqe amabhungane nezinceku, noma basebenzise izidakamizwa ezilandelayo: iBitoxybacillin, Fitoverm (bio), Aktara, Decis Profi, Zhukoed, Intavir, Kinmiks, Tanrek, njll. Ukusebenza kuyadingeka yenza esimweni sezulu esomile nesizolile ekuseni noma amahora kusihlwa kusetshenziswa imishini yokuzivikela yezitho zokuphefumula, amehlo nesikhumba.
Tags: silwa nembabala yamazambane aseColoradoI-Krasnoyarsk Territory